Mepee Visual Traceroute: Open Source Network Ngwá Ọrụ | Site na Linux
Mepee Visual Traceroute: Open Source Network Ngwá Ọrụ
Ọtụtụ oge, ndị anyị bụ ndị kariri ndị ọrụ kọmputa nkịtị, ya bụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ nchịkwa, na-amata ma jiri ụfọdụ iwu oru ma obu ngwa oru nke na-enye anyị ohere ịchọpụta n’ime omimi miri emi, otu ihe ụfọdụ si arụ ọrụ ma ọ bụ otu anyi si edozi nsogbu ufodu, nke a na-ejikọtakarị na nke anyị Njikọ .ntanetị.
Ọ bụ ezie na, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ọnụ iwu ma ọ bụ ngwaọrụ, ndị ọzọ na-ahọrọ ntụsara ahụ ngwa anya (eserese) ma ọ bụ ngwa desktọọpụ na-emezu otu ebumnobi. Ezigbo ihe atụ nke ihe ndị a na-ahụ anya bụ Mepee Visual Traceroute.
N'ihi ya, Mepee Visual Traceroute enwere ike iwere ya dika ihe nlere anya nke amara iwu traceroute. Ọzọkwa, enwere ike iwere ya dị ka ụdị free kubie ume software Traceroute anya na-akpọbu NeoTrace. Na Ẹkot nke software dị ugbu a na-akpọ VisualRoute de Anya.
1 Mepee Visual Traceroute
1.1 Gịnị bụ Open Visual Traceroute (OVT)?
1.3 Ionsdị na akụkọ
Mepee Visual Traceroute
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na Mepee Visual Traceroute (OVT), a kọwara ya ná nkenke:
"Otu Hihe eji emeghe ihe nlere na ihe nlere".
Gịnị bụ Open Visual Traceroute (OVT)?
Agbanyeghị, ị nwere ike ịsị na OVT bụ:
una free na-emeghe Java dabeere na ngwá ọrụ nnọọ uru maka visual nsuso na nchọpụta nke netwọk data ngwugwu, dị ka ọ na-eji a akụrụngwa nke 3D ma ọ bụ 2D map. Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere ịmefe data na ngwa ngwa ma ọ bụ faịlụ ederede.
Na mgbakwunye, ọ dị maka iche iche Sistemụ arụmọrụ akacha eji, ya bu, Linux, Mac OS X na Windows, ma kesaa ya n'okpuru LGPL v3 ikike.
Na ndị ọzọ ọzọ oru okwu, anyị nwere ike dokwuo anya na ngwá ọrụ a bụ nnọọ uru mgbe ọ na-abịa na eserese gosi jump nke ngwugwu data weputara na komputa anyi, na-emewanye n'ụzọ dị ịrịba ama, ihe anyị na-ahụkarị ma na-akọwa mgbe ị na-arụ ọrụ na ọdụ ya na iwu yiri ya traceroute.
Ewezuga ihe dị n'elu, OVT na-eje ozi dị ka:
Otu ngwugwu ihe ntanetị nke na-enye gị ohere ịhụ ihe data a na-eziga azụ site na mpaghara mpaghara na Internetntanetị.
Ihe nnọchi maka iwu "whois", n'ihi ọrụ ya magburu onwe ya a na-akpọ "Whois" (Whois) nke na - enye gị ohere inweta ozi gbasara ọha gbasara ngalaba.
Onye na-ekiri okporo ụzọ 3D, ekele nke data gosipụtara na map ụwa 3D. Agbanyeghị, ọ na - enye kọmpụta ndị dị ala ma ọ bụ sistemu arụmọrụ enweghị nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọala OpenGL iji mee ihe omume ahụ site na iji Maapụ 2D.
Ionsdị na akụkọ
Ugbu a nke ikpeazụ ewepụtara bụ 1.7.1, nke wetara dị ka ọhụụ mmelite a ọba akwụkwọ gaa geoip v2. Otú ọ dị, ndị gara aga mbipute 1.7.0 wetara ihe ole na ole akụkọ, nke anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-esonụ:
Njirimara: Gbakwunyere DNS locator ndekọ atụmatụ
Njirimara: Nsonye nke zighachi akwụkwọ nnọchiteanya usoro ojiji ntọala mgbe dị. Ugbu a, ọ na - enye gị ohere ịkọwa aha njirimara na paswọọdụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Njirimara: Nsonye nke mpempe akwụkwọ mgbochi.
Onye na-ere akwukwo: Wepu akwukwo nke World Wind library.
Onye na-ere akwukwo: Ntinye nkwado Java na mbipute 1.8.
Ndozi: Idozi maka nghọta network interface nchọpụta.
Ndozi: Ntọala ịbawanye oge nbudata geoip db iji zere nsogbu na mbido mbụ.
Maka ntinye Linux Ọrụ Systems nwere nchịkọta na .deb usoro. , .rpm na .sh. Maka ozi ọzọ banyere ya nwụnye, ị nwere ike na-enweta ndị na-esonụ njikọ. Na maka ozi ndị ọzọ gbasara OVT ị nwere ike ịga na njikọ ndị a Isi mmalite, GitHub y OSDN.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ngwá ọrụ na-emeghe maka netwọk akpọrọ «Open Visual Traceroute», nke kachasị na-enye ọrụ nsuso nke na-enye gị ohere ịhụ na maapụ ụwa na 3D ụzọ nke data na-esote site na kọmpụta mpaghara na sava na-aga; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Mepee Visual Traceroute: Open Source Network Ngwá Ọrụ
vkd3d 1.2 na-abịa na ndakọrịta ndozi, shading na ndị ọzọ